Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny welding welding ultrasonic?
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny famokarana indostrialy, ny plastika dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny toekarem-pirenena isan-karazany sy ny fiainan'ny olona noho ny tombony amin'ny lanjany maivana, tanjaka manokana, fanoherana ny harafo ary fanodinana mora. Ny fantsom-pandrefesana ultrasonic dia afaka mamaly ny filan'ny p ...Hamaky bebe kokoa »
Ny faritra Ultrasonic fototra amin'ny masinina fanaovana sarontava
QRsonic dia mpanamboatra matihanina manokana amin'ny fikarohana sy ny famokarana transduser ultrasonic mahery. Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia ny transducers sy ny famatsiana herinaratra ultrasonic. Anisan'izany, transduser ultrasonic 15k sy 20k sy famatsian-jiro no be mpampiasa amin'ny maha co ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hisafidianana Transducer Ultrasonic?
Araka ny fantatsika, ny transducer ultrasonic dia karazana fitaovana fanovana angovo. Ny asany dia ny fanovana ny herinaratra miditra ho herin'ny mekanika (fitarafana) ary avy eo ampitaina, ary mandany ampahany kely amin'ny herinaratra (latsaky ny 10%). Noho izany, ny fiheverana lehibe indrindra ho an'ny choo ...Hamaky bebe kokoa »